နက်ပကျွန်းဂြိုဟ် (အင်္ဂလိပ်: Neptune) သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ ၈ ခုမြောက်နှင့် နေမှအဝေးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ နက်ပကျွန်းသည် ဓာတ်ငွေ့အမြောက်အများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး မြင်နိုင်ရန်ခက်ခဲသော ခါးပတ်ကွင်း ၄ ခုရှိသည်။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင် စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးနှင့် တတိယမြောက်အလေးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာထက် ၁၇ ဆမျှပိုလေးပြီး ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ထက်အနည်းငယ်မျှ ပိုလေးသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် ဂရိနတ်ဘုရား ပိုဆီဒွန် (Poseidon) ကို အကြောင်းပြု၍ မှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏ အာကာသဆိုင်ရာ သင်္ကေတမှာ ဖြစ်သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ၁၇ ဆပိုပြီးကာ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ထက် အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်။ နေမှ ၃ဝ.၁ AU ကွာဝေးသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် သာမန်မျက်စိနှင့် မမြင်ရပေ။ ယင်းအား ရှာဖွေလေ့လာမှုထက် သင်္ချာနည်းလမ်းအရ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် တွေ့ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသောဂြိုဟ်တစ်စင်းပင်ဖြစ်သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဟာဘဲလ် အာကာသမှန်ပြောင်းနှင့် မြေပြင်အခြေစိုက် တယ်လီစကုပ်ကြီးများက အသေးစိတ်ကျသော လေ့လာမှုများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
နက်ပကျွန်း၏ နာမည်ကြီး အမည်းစက်အား မြင်နိုင်သည်။
Urbains Le Verrier
၁၈၄၆ စက်တင်ဘာ ၂၃
/ˈnɛptuːn/ ( )
6.43° နေ၏ အီကွေတာသို့
7007247640000000000♠24,764±15 kmRefers to the level of ၁ bar (၁၀၀ ကီလိုpascal) atmospheric pressure</ref>
19° 57′ 20″
၀.၁ bar (၁၀ kPa)
80 ± 3.2% ဟိုက်ဒရိုဂျင် (H2)
19 ± 3.2% ဟီလီယံ (He)
1.5 ± 0.5% မီသိန်း (CH4)
~0.019% ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဂျူတာရိုဒ် (HD)
~0.00015% အီသိန်း (C2H6)
ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား အရွယ်အစားနှိုင်းယှဉ်ပြပုံ
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏လေထု (ဂြိုဟ်၏အပေါ်တွင်လွှင့်မျောနေသော ဓာတ်ငွေ့အလွှာ) မှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ဟီလီယံဓာတ်ငွေ့တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မီသိန်းဓာတ်အနည်းငယ်မျှပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂြိုဟ်၏အရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်နေသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ အပြာရောင်မှာ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ ဆတူမျှပါရှိသော ယူရေးနပ်ဂြိုဟ်၏အပြာရောင်ထက် များစွာပို၍တောက်ပသည်။ ထို့ကြောင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ် အပြာရောင်တောက်ပခြင်းမှာ အခြားအကြောင်းများလည်း ရှိနိုင်သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ခတ်သော လေမှာ နေအဖွဲ့အစည်း အတွင်းရှိ အခြားဂြိုဟ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံးအနေနှင့် တစ်နာရီလျှင် ၂၁၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်း (မိုင် ၁၃၀၀ နှုန်း) အထိတိုက်ခတ်သည်ဟု တိုင်းတာရရှိသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ၁၇ ဆပိုမိုကြီးမားသော်လည်း ဂျူပီတာဂြိုဟ်၏ ၁၉ ပုံတစ်ပုံသာ ရှိပါသည်။
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူ အာဘိန်လီ ဗဲရီယာ
အချို့သော အစောဆုံး မှတ်တမ်းများအား တယ်လီစကုပ်များမှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၆၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဂယ်လီလီယိုမှ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကြယ်တစ်စင်းနှင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား မှားယွင်းခဲ့ဟန်တူသည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ကို အာကာသပညာရှင်များ ဖြစ်သော အာဘိန်လီဗဲရီယာ(Urbain Le Verrier) နှင့် ဂျွန်ကော့ရှ်အဒမ်(John Couch Adams) တို့က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင့်းဖြစ်ပြီး ၂ ဦးစလုံးမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ထိုဂြိုဟ်မှာ တယ်လီစကုပ်ကို သုံး၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ သင်္ချာနည်းဖြင့်တွက်ချက်မှုကြောင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ပထမဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ ဂြိုဟ်ရံလ ပရိုသီယပ်စ်
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်တွင် ဂြိုဟ်ရံလ ၁၄ စင်းရှိသည်။  ထရီတွန် (Triton)သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ထိုဂြိုဟ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၁၇ ရက်အကြာတွင် ဝီလီယံ ဟာရှယ်ဆိုသူမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တချိန်တုန်းကမူ ကျူးပါး ခါးပတ်ထဲမှ ဂြိုဟ်သိမ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့နိုင်ကောင်းပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ထရိုင်တွန်သည် ကမ္ဘာမြေနှင့် အနီးဆုံးအကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထရိုင်တွန်သည် နောင်နှစ်ပေါင်း ၃.၆ ဘီလီယံအကြာတွင် ကျိုးကြေပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။] ထရိုင်တွန်၏ ပတ်လမ်းမှာ အခြားသာမန်ဂြိုဟ်ရံလများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ပတ်လမ်းအတိုင်း ၂၃ ဒီဂရီတိမ်းစောင်းလျက် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား လှည့်ပတ်နေသည်။ ထရိုင်တန်သည် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရံလနှင့် ပလူတိုဂြိုဟ်သိမ်ထက်ပင် ကြီးမားပါသည်။
နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ အခြားဒုတိယအကြီးဆုံးဂြိုဟ်ရံလမှာ နီရီး (Nereid) ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဗွိင်ယေဂျာ ၂ မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နီးရီးဂြိုဟ်ရံလသည် ထရိုင်တွန်၏ ဝ.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော ထုထည်သာ ရှိသည်။ အခြားသော ပုံစံမမှန်သော အတွင်းဘက်ဂြိုဟ်ရံလများအား ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးနှင့် အသေးငယ်ဆုံးသော ဂြိုဟ်ရံလကိုမူ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယူရေးနပ်ဂြိုဟ်သည် သူ၏နေပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ထူးခြားသော ရွေ့လျားမှုများကြောင့် အာကာသပညာရှင်များသည် ဂြိုဟ်အသစ်ကို ရှာဖွေစေခဲ့သည်။ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ကို ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကသာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ရက်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သေးသည်။ တစ်ခါတုန်းက နတ်ပကျွန်းမှာ အလွန်ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်း "မဟာမှောင်မဲသောအစက်"ဟု လူသိတဲ့မုန်တိုင်းကို ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်က ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ တွေ့ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အမှောင်စက်ကြီးအား ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် မြင်ခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်နောက်ပိုင်းကတည်းက အသစ်သော အစက်များကိုလည်း မြင်ခဲ့ရပါသည်။အဘယ်ကြောင့် အမည်းစက် ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်ကိုမူ မသိရပေ။ နာဆာ၏ အနာဂါတ်အာကာသယာဉ်များက နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် အကြံပေးထားပါသည်။
Hamilton၊ Calvin J. (4 August 2001)။ Neptune။ Views of the Solar System။ 13 August 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Walter၊ Elizabeth (21 April 2003)။ Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2nd ed.)။ Cambridge University Press။ ISBN 978-0-521-53106-1။
Yeomans၊ Donald K.။ HORIZONS Web-Interface for Neptune Barycenter (Major Body=8)။ JPL Horizons On-Line Ephemeris System။ 18 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Seligman၊ Courtney။ Rotation Period and Day Length။ 13 August 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Williams၊ David R. (1 September 2004)။ Neptune Fact Sheet။ NASA။ 14 August 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter (3 April 2009)။ 10 April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (produced with Solex 10 Archived 29 April 2009 at WebCite written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
"Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006" (2007). Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 98 (3): 155–180. doi:10.1007/s10569-007-9072-y. Bibcode: 2007CeMDA..98..155S.
Chang၊ Kenneth။ "Dark Spots in Our Knowledge of Neptune"၊ New York Times၊ 18 October 2014။ 21 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Munsell၊ Kirk (13 November 2007)။ Neptune overview။ Solar System Exploration။ NASA။ 20 February 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Suomi, V. E. (1991). "High Winds of Neptune: A possible mechanism". Science 251 (4996): 929–932. doi:10.1126/science.251.4996.929. PMID 17847386. Bibcode: 1991Sci...251..929S.
Williams၊ David R. (29 November 2007)။ Planetary Fact Sheet – Metric။ NASA။ 13 March 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
William Sheehan (December 2004). "The Case of the Pilfered Planet – Did the British steal Neptune?". Retrieved on 20 January 2011.
Hubble Space Telescope discovers fourteenth tiny moon orbiting Neptune | Space, Military and Medicine. News.com.au (16 July 2013). Retrieved on 28 July 2013.
Agnor, Craig B. (2006). "Neptune's capture of its moon Triton inabinary–planet gravitational encounter". Nature 441 (7090): 192–194. Nature Publishing Group. doi:10.1038/nature04792. PMID 16688170. Bibcode: 2006Natur.441..192A.
"Tidal evolution in the Neptune-Triton system" (1989). Astronomy and Astrophysics 219 (1–2): L23–L26. EDP Sciences. Bibcode: 1989A&A...219L..23C.
Neptune and global warming Archived 12 May 2008 at the Wayback Machine.